Shiinuhu waxay ka sameynayaan ganacsi cadaalad ah Afrika kahor imaatinka sahaminta Yurub - Afrikhepri Fondation
khamiista, Janaayo 21, 2021
Shiinaha ayaa ganacsi cadaalad ah ka sameynayay Afrika kahor imaatinka sahamiyayaal reer Yurub ah
Zheng He, oo sidoo kale loo yaqaan Cheng Ho - Admiral Shiine ah ayaa hoggaamiyay raxan ballaaran oo 200 ilaa 300 oo markab ah Badweynta Hindiya sanadkii 1418. Waxaa jiray ganacsi badan. Safarradan midkood, wuxuu dib uga soo ceshay geel ka yimid Malindi, oo ah tuulo Sawaaxili ah (oo hadda loo yaqaan KENYA), taas oo Shiinaha looga tixgalin jiray tusaale ahaan xayawaankii caanka ahaa ee Qilin. Afrika waxay lahayd waxyaabo uu Shiinuhu doonayay: foolka maroodiga daawo, dhir udgoon, alwaax qalaad, iyo duurjoogta qalaad. Zheng Wuxuu dib uga soo ceshaday libaaxyada, orynxes, nilganias, digaaga iyo gorayada dalal Afrikaan ah oo laga soo siiyay dahab, qalin, daal iyo xariir.
Shiinuhu ma aysan dooneynin inay ka sameystaan ​​saldhigyo rasmi ah dalka gudihiisa laakiin taa badalkeeda waxay rajeynayeen inay qof walba ka dhigaan kuwa la dhacsan ilbaxnimadooda. Waxay ku jirtaa ruuxaan in ciidamada badda ee Shiinuhu aysan bililiqeysan, (si ka duwan reer Yurub) dowladihii booqday maxaa yeelay Zheng He iyo boqortooyadii MING ma raadin doonaan addoomo ama dahab ama qalin ama dhir udgoon.
Da Ming Hun Yi Tu, waa khariidadda Boqortooyada weyn ee Ming (Shiinaha Qadiimiga ah)
Waxaa lagu abuuray Shiinaha 1389, oo si cad u muujinaya qaabka Afrika, in ka badan 100 sano ka hor sahamiyayaal yurub iyo sawir qaadayaal reer Yurub ah ma aysan gaarin qaaradda. Da Ming Hun Yi Tu wuxuu bilaabmay 1389, taas oo la dhihi karo waa khariidada ugu da'da weyn adduunka oo si daacadnimo leh uga tarjumeysa jiritaanka qaaradda Afrika.http://fr.wikipedia.org/wiki/Da_Ming_Hun_Yi_Tu (kor ku xusan khariidada adduunka ee uu sameeyay Admiral Zheng He)
Caddaynta qadiimiga ah
Koox isku dhaf ah oo ku takhasustay qadiimiga taariikhiga ah ee Shiinaha ee jooga Kenya oo helay qarnigii 15aad ee Shiinaha ee Mambrui - tuulo yar oo aan qoraal lahayn oo woqooyiga ka xigta Malindi oo ku taal xeebta waqooyi ee Kenya.
Qeybahaas waxaa sameeyay kaliya ergooyinkii Emperor, Chengzu, ”Professor Qin. (Inta udhaxeysa 1403-1424)
Kadib, dhowr sano ka hor, kalluumeysatada ka soo jeeda magaalada xeebta ku taal ee Lamu ee waqooyiga Kenya ayaa shabagyadoodii ku dhejiyay dhalooyinka Shiinaha, waxayna mas'uuliyiinta Shiinaha ku sameeyeen tijaabooyin DNA ah tiro ka mid ah tuulooyinka tuulada sheeganaya. Shiineys.
Tijaabooyinku waxay umuuqdaan inay xaqiijinayaan waxa dadka tuuladu marwalba rumeysan yihiin - in maraakiibta Zheng He ee raxan raxan ay ku degtay duufaan iyo badbaadiyeyaasha shaqaalihii isqaba, taas oo macnaheedu yahay in dadka qaar ee aagga ay wali leeyihiin astaamo khiyaano Shiinaha ah
Shiinuhu wuxuu Afrika kula ganacsan jiray ixtiraam iyo xaqsoor waligiisna ma rabin inuu gumeysto, ka faa’iideysto kheyraadka macdanta ama addoomo ugu qaato Afrika. si ka duwan reer galbeedka oo yimid boqol sano kadib ...
Maskaxda iyo Maskaxda - Jiddu Krishnamurti (Audio)
Afro-farac u ah Brazil iyo Haiti: daraasad ku saabsan aragtida madow
Fudaydnimada runnimada ruuxiga ah - Mooji (Fiidiyo)
Dhakhtarka kuhadlaya - Amit Goswami (Audio)
Asalka Awoodda Madow - Documentary (2020)